မြန်မာ – အင်္ဂလိပ် – မြန်မာ အဘိဓါန် ~ Saw Chit Diary
Posted by Andrew Zaw
No comments | Saturday, April 27, 2013
မြန်မာနိုင်ငံသားများ တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း မိမိကွန်ပျူတာတွင် အဘိဓါန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီ အဘိဓါန်လေးကို ကွန်ပျူတာထဲမှာ ထည့်သင့်ပါတယ်။ ဖောင့်အနေနဲ့လည်း Zawgyi-one, Myanmar3, Ayar Burmese စတဲ့ (၃)မျိုးပါတာကြောင့် ကြိုက်တာသုံးနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီ program လေးကို ကိုစိုးမင်းမှ ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Name: wxPyDict_setup.rar
Description: This program for all
မြန်မာကီးဘုတ် လက်ကွက် လေ့ကျင်ခန်း ပရိုဂရမ် (Unic...
အရှင်ဇ၀န (မေတ္တာရှင်) ရွှေပြည်သာ မန္တလေးကျောင်း၊ ရွြှေ...
Useful 100 keyboard shortcuts.
Speed up your computer without any software ..
ကီးဘုတ်ကို သုံးပြီး ကွန်ပျူတာပိတ်တဲ့နည်းလမ်းများ.....
George W. Bush ပြတိုက်ဖွင့်လှစ်
Create System Restore Point!